Bangayithatha njani inxaxheba abantu kwiinkqubo zikamasipala? – Civics Academy
UMthetho weeNkqubo zika Masipala unika uluntu ilungelo lokufaka isandla kwisigqibo, ukuhambisa iingcebiso kunye nezikhalazo kumabhunga kamasipala, ukwaziswa ngeentlanganiso zebhunga kunye nezigqibo, ukuhlaziywa malunga nemicimbi yebhunga, nokuya kwiintlanganiso ezivulekileyo. Isahluko 4 soMthetho sifuna ukuba ulwazi lufikeleleke kubo bonke abantu. Abantu ba mele bathathe inxaxhebo ezimpilweni zabo.
Iinkqubo ezithile, ezifuna ukuthatha inxaxheba koluntu, zi:
1. Ukulungiswa kwemithetho kamasipala okanye imithetho kamasipala
2. Uyilo lwe-IDP
Imiba yezezimali kuquka kubhajethi
4. Ulawulo lweNtsebenzo
Ukuthatha inxaxhebo kwi masipala kwabemi kwiAfrika
Ukuthatha inxaxheba kumaphulo kamasipala, kufuneka siqhagamshelane nekomiti yewadi kwaye sinamathele kwizikhokelo eziqhelekileyo malunga nendlela yokuziphatha ngayo.
Kwihlabathi elixhamlayo, elibhekiselwe yintlangano yamazwe ngamazwe kwiinkcukacha ezabelwana ngazo, kunye neqela elikhulu kunye nokubandakanyeka komntu kunye nokubambisana, ukuthatha inxaxheba kwabemi kunikezela ngamathuba okuvuselela intando yesininzi, ukuphendula uxanduva kunye nomthetho wolawulo.
Ukuxhotyiswa koluntu ukuqhubela phambili ulawulo lwentando yesininzi akukho mingeni. Ukungathembeki komnye kunye nokwandisa kukhulisa isithuba phakathi kwabemi kunye neenkokheli zabo. Ukunyanzeliswa okuqhubekayo kunye nokunyanzeliswa kwemithetho kunye namaziko karhulumente kwiinjongo zezopolitiko zizama rhoqo ukuphazamisa inkcaso. Ukongezelela, ukuba imibutho yoluntu igaleleke ekuphuculeni ukulawula e-Afrika
Kwamazwe amaningana, ubukho bemibutho yangaphandle neyamazwe engekho karhulumenteni – kunye neemeko zokugqibela zengqesho – zihlala zikhokelela kwingingqi “yengqondo” ekhupha iminyango kazwelonke kunye noluntu olunamandla amaninzi kunye nezibonelelo.
Amazwe aseAfrika ayanda ukuthatha amanyathelo okunciphisa urhwaphilizo ngokuthatha inxaxheba kwabemi. Funda kabanzi malunga namanyathelo kule dilesi
jongo zengingqi kunye namazwe ngamazwe ukwenzela ukuthatha inxaxheba kwabemi
Ngaphantsi kolawulo oluqhelekileyo lweKhomishoni yase-Afrika yase-Ethiopia (AU) kunye nokulungelelaniswa kwee-Architecture zase-Afrika ezisandul ‘ukutshalwa, ukubeka esweni ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo kuqinisekiswa ngeendlela zombini kunye nezopolitiko ezifana neKhomishoni yaseAfrika kunye neNkundla yabasebenzi kunye namalungelo abantu